Loham-piasa 3 lehibe tsy tokony hotadidina amin'ny bilaogy B2B | Martech Zone
Loham-piasa 3 lehibe tsy tokony hotadidinao amin'ny fanaovana bilaogy B2B
Alarobia, Septambra 19, 2007 Alahady, Jolay 7, 2013 Douglas Karr
Amin'ny fanomanana ny Konferansa momba ny asa aman-draharaha momba ny varotra tany Chicago, dia nanapa-kevitra ny hikapoka kely ilay slide fampisehoana nataoko aho. Fampisehoana miaraka amina bala am-polony taonina dia RNH, mahatsiravina ary tsy dia tadidin'ny mpitsidika ny fampahalalana naroso.
Fa kosa, te-haka fehezan-teny telo izay tokony hipetraka ao an-dohan'ny mpivarotra aho rehefa miresaka B2B fitorahana bilaogy. Ary koa, tiako ny mampihatra sary matanjaka mba hahatsiarovan'ny olona ny hafatra.
Nisafidy ny sarin'i Seth Godin. Manaja an'i Seth ny olona satria mpitarika eritreritra amin'ny indostrian'ny Marketing sy Advertising izy. Milomano manohitra ny ony i Seth ary manana fanomezana amin'ny fanasongadinana mazava tsara ny tsy fahombiazan'ny status quo. Ataony mieritreritra isika. Ny olon-drehetra dia mankasitraka ny mpitarika eritreritra ary ny fanekena azy ho iray dia miavaka amin'ny orinasanao. Ny bilaogy dia fampitaovana tonga lafatra ahafantarana azy ho mpitarika eritreritra.
Tsy tian'ny olona ny mamaky teny amin'ny pejy iray, tiany ny maheno feon'olona. Raha jerena, ity sary kely an'ny Jonathan Schwartz, Blogger ary CEO an'ny Sun Microsystems vs. Samuel J. Palmisano, Filohan'ny Birao, IBM - mijery ny isan'ny pejy misy rohy mankany amin'ny tranonkalany avy.
Tena tsy fantatro hoe iza ny filohan'ny Birao ho an'ny IBM rehefa nikaroka momba izany aho.
Ny teny farany dia ny tahotra. Izany no manakana ny ankamaroan'ny orinasa tsy hamorona bilaogy. Matahotra ny tsy ho voafehin'ny marika intsony, matahotra ny fanehoan-kevitra ratsy, tahotra olona manondro ny rantsan-tànany sy mihomehy, matahotra milaza ny marina. Ny sasany amin'ireo statistika dia manondro ny fanimban'ny tahotra ny fahaizan'ny marika sasany hisarika ny mpamaky sy ny saina. Ny sasany amin'ireo statistika hafa dia manondro ireo orinasa naharesy ny tahotrao ary namoaka izany ho an'ny olona mandevona… ary mandresy izy ireo noho izany.
Tsy paikady mihitsy ny tahotra. Nisy nilaza tamiko indray mandeha fa tsy afaka mihazakazaka haingana mihitsy ianao rehefa mijery ao aorianao foana. Betsaka ny orinasa tsy matoky tena ary matahotra ny tsy fantatra. Ny mahatsikaiky dia ny fahatahoran'izy ireo indrindra satria tsy naharesy izy ireo.
Tags: bilaogy b2b
Nahavita soa i Verizon androany! AT&T Tsy dia tsara loatra…
Miarahaba an'i Jim Cota sy ny ekipa ao amin'ny RareBird!
Sep 20, 2007 amin'ny 12: 43 AM
Ireo entana telo nolazainao ireo dia lohahevitra niadian-kevitra tao amin'ny orinasako. Ny mampihomehy dia ny teboka 1 sy 2 dia fifanakalozan-kevitra mora. Matetika amin'ny pejy iray ny olona rehetra ary manaiky azy ireo ho marina. Ny teboka faha-3 kosa dia efa olana miverimberina efa ela. Ny olona na toa mahazo izany na tsia. Tsy afaka milaza aminao aho hoe impiry ny lohahevitr'ireo fanehoan-kevitra ratsy no tonga antony iray hanaovana tsy haino aman-jery sosialy. Tonga hatrany amin'ny fahatahorana mpifaninana iray aza manao sabotage antsika amin'ny alàlan'ny fandefasana lainga * sento *. Mitohy ny tolona.
Sep 20, 2007 amin'ny 7: 23 AM
Ny vaovao tsara dia tsy misy fitsipika voafaritra momba ny fanaraha-maso ireo hevitra ao amin'ny bilaogy b2b fandraharahana. Tsotra toy ny fametrahana 'fitsipika mahafinaritra' izay ahalefaka ny fanehoan-kevitra rehetra ary midika hoe tsy jerena na valiina ho azy manokana ny hevitra. Manana fanehoan-kevitra mihoatra ny 3,000 ao amin'ny bilaogiko aho ary tsy maintsy nanoratra olona 2 fotsiny ary nilaza tamin'izy ireo fa tsy handefa ny hevitr'izy ireo aho.
Aza adino ny mampahafantatra ny olona eo alohany - bilaogy fandraharahana ity hanokafana ny fifandraisana amin'ny mpanjifanao sy hahitana vahaolana - fa tsy forum misokatra hametrahana ny orinasa. Ary koa, raha mpanjifa tezitra ireo, ny fotoana ahafahana manoratra azy ireo manokana sy manampy azy ireo hivoaka dia mety hampiodina azy ireo!
Ny fahamaotinana dia singa lehibe amin'ny sehatra fitorahana bilaogy rehetra. Miaraka amin'ny bilaogy B2B, manizingizina aho fa!
Mampihomehy, ny olana amin'ny tsy fitovizan'ny orinasa dia tsy mahita ny orinasa ho 'olona' ny olona. Mahalana ny olona miresaka amin'ny olona iray amin'ny fomba fanoratany orinasa. Miteny avy amin'ny zavatra niainako aho… Hamoaka orinasa aho rehefa fenoy ny endrika 'contact us', saingy rehefa mandeha an-telefaona amin'izy ireo aho dia fantatro fa tsy fahadisoan'ilay olona any am-pita hafa izany ary omeko azy .
Ny fananana bilaogy dia manome ny mpanjifa olona iray hahita sy hahafantatra - mampihena ny loza ateraky ny fanombohana ady amin'ny Internet.
Mirary anao ho tsara vintana!
Sep 20, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Misaotra anao amin'ny valiny. Mametraka hevitra tsara ianao. Mirona hisoratra anarana amin'ny sekolin'ny media sosialy “fanehoan-kevitra tsy misy antonony” aho. Tsapako fotsiny fa manome fahatsapana hery amin'ny mpamaky / mpanjifa ny haino aman-jery izy io. Io, tsy isalasalana, dia miteraka tahotra ao anatin'ny orinasako. Angamba tokony halefaka kely ny fomba fanatonako.